Ex-Thai PM Shinawatra flies back afterasecret two-day trip to Lumbini
Former Prime Minister of Thailand Thaksin Shinawatra visited Lumbini, the birthplace of Buddha, and performed prayers there on Saturday before flying back to Myanmar where he is living in exile.
Thaksin Shinawatra arrived in Lumbini directly from the Tribhuvan airport Friday evening‚ visited the Royal Thai Monastery constructed by Thailand government and Maya Devi temple today.
He was accompanied byadozen people including Thai ambassadorfor Nepal and some family members.
Shinawatra had secretly landed at the Tribhuvan International Airport onachartered plane yesterday and flew back inasimilar fashion after visiting Lumbini.
He did not visit Kathmandu nor did he meet anybody from the Nepal government.
Shinawatra, one of the richest businessmen of Thailand, was deposed inamilitary coup and has been in exile since then. nepalnews.com
မြန်မာပြည်မှ နီပေါကို သွားတယ် ဆိုတဲ့ သက်ဆင်
Saturday, December 17, 2011 zarny win
AP သတင်းဌာနက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နာရီကျော်တုန်းက ဖော်ပြလိုက်တဲ့ပုံပါ။
ပြည်ပမှာ တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ သက်ဆင် ဒီကနေ့ နီပေါနိုင်ငံ လုမ္ဗိနီမှာ တွေ့ရတဲ့ပုံလို့ ဆိုပါတယ်။ နီပေါကို သောကြာနေ့ကတည်းက ရောက်တယ်၊ စင်းလုံးငှားလေယာဉ်နဲ့ မြန်မာပြည်ကနေ လာတယ်လို့ ဆိုတယ်။
Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra, second left, takesatour of the birthplace of Buddha in Lumbini, Nepal, Saturday, Dec. 17, 2011. The former Thai leader was overthrown ina2006 military coup and lives in self-imposed exile after being convicted of corruption-related charges. Police official Dharmaraj Bhandari says Thaksin arrived in Nepal on Friday onachartered aircraft from Myanmar and immediately flew to Lumbini for his pilgrimage.
တနင်္လာ, 19 ဒီဇင်ဘာ 2011
ပြည်ပကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင်ရှင်န၀ပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က သွားရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အရင်စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံက ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာကို ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာ တက်ဆင်က မြန်မာပြည်ကိုသွားမယ့် သူ့ရဲ့ညီမ လက်ရှိ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်ရှင်န၀ပ်ရဲ့ ခရီးစဉ် ချောမွေ့ အဆင်ပြေအောင်နဲ့ မစ္စ်ယင်းလပ်နဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကိစ္စတွေ အကူအညီပေးဖို့အတွက် သွားရောက်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မစ္စ်ယင်းလပ်ရှင်န၀ပ်ဟာ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မဟာမဲခေါင်မြစ် ဒေသခွဲနိုင်ငံများ ညီလာခံကို တက်ရောက်ဖို့ အခုမြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။
မဟာမဲခေါင်မြစ် ဒေသခွဲနိုင်ငံတွေကတော့ မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက ဝေဖန်သုံးသပ်သူ တချို့ကတော့ ၀န်ကြီးချုပ် ယင်းလပ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီခရီးစဉ်ကို အသုံးချပြီး တက်ဆင်ရှင်န၀ပ်နဲ့ အလွမ်းသင့်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ အကျိုးအမြတ်ရရှိအောင် ပြုလုပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် သတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်နေပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/17/2011
ဒေသခံ ပြည်သူများ စုပေါင်းပြီး ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာနိုင်
ကော့သောင်းမြို့လယ်တွင် အရာရှိတစ်ဦးအပါဝင် စစ်သားတခ...